Sheekh Shariif oo u ambabaxay Jabuuti | KEYDMEDIA ONLINE
Sheekh Shariif oo u ambabaxay Jabuuti
Madaxweynihii 7aad ee dalka ayuu soo noqday 2009-2012, waxuuna isku diyaarinayaa inuu markale u tartamo xilka doorashadda Febuary 2021.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sheekh Shariif ayaa maanta u safray Jabuuti, oo ah halkii lagu doortay 2009, kana soo billowday geediga siyaasadiisa iyo hogaanka. Waxaa uga soo horeeyay Jabuuti oo dhawaan booqday Xasan Cali Khayre oo isna musharax Madaxweyne ah.
Waxaa safarkiisa ku wehlinaya xubno katirsan Madasha Xisbiyadda Qaran, oo isaga uu hogaamiye ka yahay, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Lama oga ujeedka safarkiisa, balse waxuu qeyb ka yahay ololihii doorashadda.
0 Comments Topics: doorashadda 2020 jabuuti sheekh shariif